Ogaden News Agency (ONA) – JWXO waa u diyaar inay bud-dhige u noqoto marxaladda cusub
JWXO waa u diyaar inay bud-dhige u noqoto marxaladda cusub
Odayaal nagala soo xidhiidhay Jigjiga ayaa nala soo scodsiiyay in dadweynaha wax-garadka ah ay aad ula socdaan xaaladda ka jirta Itobiya isla markaana ay ku mashquulsan yihiin sidii marxaladaha cusub ee kusoo wajahan Itobiya loola jaan qaadi lahaa.
Fariimaha Odayaashaa ay soo dirayaan waxaa ka mid ah in umadda loo jaheeyo midnimo oo la iloobo kala qaybinta iyo u adeega waxaan ahayn danta guud ee umadda Somaliyeed ee Ogadenya. Arintaasina waxay ku iman kartaa ayay yidhaahdeen iyadoo Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya u noqota bud-dhige hanashada marxaladda cusub ee Itobiya ay gashay, iyadoo qawmiyad walba ay bilowday inay ka tashato aayaheeda iyo siday ka yeeli lahayd markay Itobiya kala yaacdo. Fursaddan qaaliga ah ee inugu soo fooleh waxaa looga faa’idaysan karaa ayay yidhaahdeen iyadoo dhalinyarada hubka haysta loo jaheeyo dhamaantooda danaha umadda, waxayna ku baaqeen odayaasha in shir deg-deg ah isugu yimaadaan Naftood-hurayaasha JWXO iyo kuwa Liyu-Booliska ee Cabdi iley uu qortay, loona sheego istraatiijiya wadajir ah oy ku wada socdaan inta lagu jiro marxaladdan kala guurka ah.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay hubka u qaaday oo dhibaatada halganka iyo duruufaha adage e ku xeeran ay ugu dulqaadatay waa danta umadda iyo inuu shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ay gacanta ku dhigaan Aayahooda ugana xoroobaan gumaysiga Itobiya. Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay ugu baaqday dhalinyradda hubka loogu dhiibay inay dhufays u noqdaan ciidanka Itobiya, inay ka waantoobaan dambiyada ay kagalayaan shacabkooda kuna soo biiraan halganka. Waxay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya diyaar u tahay inay safxad cusub la furto xooggaga loo adeegsanayo dhibaatada shacabka ee ka kooban maamulka Jigjiga, dhalinyarada hubaysan ee loo yaqaano Liyu-Booliska (Hawaarin), Odayaasha dabka hurinaya, waxayna soo dhaweynaysaa JWXO fikradaha toolmoon ee naga soo gaadhay Wax-garadka jooga Jigjiga.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya si hoose ayay ula socotaa marxaladda ay mareyso Itobiya, waxayna jabhaddu iskaashi iyo wada-tashi uu ka dhaxeeyaa dhamaan xoogagga kasoo horjeeda Gumaysiga iyo xad-gudubyada xukuumadda TPLF.
Wixii talooyin ah ee ku saabsan marxaladan sidii looga gudbi lahaa waxaad ku soo hagaajisaan cinwaankan: